१० दिन क्वारेन्टाइन बसेर घर पुगेका बाबुले छोराछोरी भेट्नै पाएनन्, घरमा मात्र होइन पुरै गाउँ शो’कमा डुब्यो ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाज१० दिन क्वारेन्टाइन बसेर घर पुगेका बाबुले छोराछोरी भेट्नै पाएनन्, घरमा मात्र होइन पुरै गाउँ शो’कमा डुब्यो !
१० दिन क्वारेन्टाइन बसेर घर पुगेका बाबुले छोराछोरी भेट्नै पाएनन्, घरमा मात्र होइन पुरै गाउँ शो’कमा डुब्यो !
रोल्पा : वि’स्फोटमा छोरा र छोरी गु’माएका रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका-७ गैरीगाउँ मैतेगातिनाका लालबहादुर खत्रीका आँसु थामिएका छैनन्। उनकी पत्नीको हालत पनि उस्तै छ। बिहीबार साँझ उनीहरुका लागि कालो दिन भयो। ११ वर्षीया छोरी विमला र ५ वर्षीय छोरा विजयको वि’स्फोटमा परेर मृ’त्यु भयो। काखमा दुई वर्षकी छोरी छन्।
बाख्रा चराउन जंगल गएका चार बालबालिका साँझ घर फर्किएनन्। १४ वर्षीय छोरा नोखिराम गुमाएका ओजबहादुर डाँगीको परिवार पनि शो’कमा डुबेको छ। आमा र छोराछोरी स’म्हाल्न धौधौ परेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका-४ छेपबाट मामाघर आएका १३ वर्षीय गौरव नेपाली सधैका लागि घर नफर्किने गरी ब’मको छ’र्रासँगै क्ष’त वि’क्षत भए। आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खेमबहादुर बुढाले लेख्नु भएको छ ।
गौरवका एउटी दिदी घरमा रहेको बुबा लक्ष्मण नेपाली बताउँछन्। मृ’त्यु भएका चारैजना बालबालिकाको घरमा मात्र होइन गाउँ पुरै शो’कमा डुबेको छ। कल्पनानै नगरेको घ’टनाले गाउँले त्रसित समेत बनेका छन्। ‘घर नजिकैको गाउँबारीमा रातभर ला’स ल’डि रहे, बालबालिकाका बुवाआमा, आफन्त र गाउँले आँ’सुमा डु’विरहेको दृश्य निकैले घ’टना स्थल पुग्ने जोकोहीको आँखा ओ’भानो रहेनन्।’
घटनास्थल पुगेका मानवअधिकार वादी संस्थाका हुरेकका संयोजक धरेन्द्र डाँगीले भने। श’व उठाउने बेला र घ’टना स्थलमा फेला परेको नपड्एिको टुईन्च मोर्टारको गोली डिस्पोज नगरुन्जेल घटनास्थलमा पुगेका सबैका आँखा रसाइरहे। बिहानभर आकाश पनि वर्षी रह्यो भने गाउँलेका आँ’सु पनि बगिरहे। मजदुरीमा गएर फर्किएका लालबहादुरले दुई छोराछोरी सग्लो भेट्न पाएनन्।
को;रोनोको महा’मारीका कारण काठमाडौं इँट्टा भट्टामा अ’लपत्र परेका उनी ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको टोलीले घर आउन सघाए पनि उनी घर पुग्न सकेका थिएनन् । गाउँ फर्किएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नु प¥यो । उनी छिमेकी ह्याङ विद्यालयमा दश दिन क्वारेन्टाइनमा बसे। ‘क्वारेन्टाइनमा दश दिन बसेर दिउँसो चार बजे घर आएँ। घर आउदा छोराछोरी थिएनन्। गोठालो गएका रैछन्।’, लालबहादुरले आँ’सु पुछ्दै भने, ‘साँझ ६ बजे वि’स्फो’टको आवाज सुनियो। हेर्न जाँदा छोराछोरी क्ष’त वि’क्षत देखेँ।’